Gemma uLouise Atkinson - actress abadumile isiZulu kanye imodeli yimpumelelo. Le ntombazane amahle ebukekayo wazalwa ngo-November 16, 1984 e-UK, edolobhaneni elincane Bari, okuyinto eduze Manchester. Gemma Atkinson, indodakazi "Mnu Bean", kwaba khona ingxenye enkulu yokuphila kwakhe.
Imibukiso yangempela, TV ewuchungechunge, "I-oki engcwele", ihlumela isithombe sokuqala
It yabhekisela ngengozi ngokwanele, ngesikhathi ukuqopha of umbukiso ngokuthi "Mina - usaziwayo ... Ngithathele outta lapha!", On okuyinto umsebenzi ehlathini lase-Australia, ezimweni ezinzima. Kwakungenxa 2004.
Gem bamenywa ukuba ahlanganyele kokuqoshwa owuchungechunge "I-oki engcwele." Le filimu serial babekhonza iminyaka amantombazane ukuqala naye futhi waqala umlando ukunyukela kuwo kuya Olympus inkanyezi.
Eminyakeni okwalandela iminyaka emihlanu, Gemma (Gemma), Atkinson inkanyezi ochungechungeni TV "Le oki engcwele" njengoba ingane kunzima futhi wazama yena njengesibonelo. Wanquma ukuthi ngempela sifinyelele udumo futhi babe inkanyezi yangempela.
Lesi sigameko sokuqala senzeka iqhaza Gemma namanje ekuqaleni 2006, futhi kulo mkhakha ke ngaso sonke isikhathi sihambisana inhlanhla nempumelelo ezinhle. izithombe wakhe manje bese uvele omagazini ezifana abadumile ecwebezelayo like Arena, Loaded, FHM, Nutssize, Maxim, futhi Zoo.
umcimbi esiza abantulayo
Namuhla wonke umuntu uyazi ukuthi webele imodeli Chic nomlingisikazi - umphumela umzamo odokotela abahlinzayo. Ngo-2006, le nkosikazi yanquma ukwandisa usayizi wakhe ngokudayisa kuze kube lesithupha. Gemma Atkinson sobstvennolichno watshela ngalo ohlelweni lwethelevishini.
Esikhathini kwentwasahlobo ka-2007, imodeli uye wahlanganyela umcimbi esiza abantulayo - umjaho esikhethekile amakhilomitha amahlanu, ngemali owawunikwe ukusiza Isikhwama umdlavuza webele iziguli. Gem akuyona alien ukuthinta izicukuthwane kuphela.
Active abaphila eminyakeni yangemva
Esikhathini esizayo, uyaqhubeka iqhaza ukuthathwa izithombe for omagazini ecwebezelayo, kumaphethini ahlukahlukene kanye ogawuthola, kuyinto lingerie. abalandeli bakhe babe kunikwa ematfuba lamanyenti usithande. Gemma Atkinson, ogama izithombe zihlale emangalisayo sexy, omningi. Phakathi kwezinye izinto, engawuboni bayakhohlwa esiza abantulayo.
Gemma wabonakala kumabonakude, e uhlelo "Izinkanyezi insipho uchungechunge", futhi livela njengendlela uLieutenant ngegama Eva Makkena e umdlalo we-Red Alert 3. Ngaphezu kwalokho, wafumana indima kwadingeka khona ifilimu "Boogie Woogie" ngo-2008 . Yena waba nenhlanhla ukusebenza Heather Graham, Dzheymi Uinstonom, futhi Christopher Lee. Le filimu waboniswa ekupheleni ehlobo 2008.
Ubuhlobo Cristiano Ronaldo
Ngokushesha wabuya futhi esephethe ebuhlotsheni odumile kakhulu football player Cristiano Ronaldo. Akazange bathanda ukutshela elihlangabezana Gemma. Ubuhlobo baphela ngemva kokufunda ukuthi Ronaldo waqasha izifebe.
Kuze kube manje, Gemma Atkinson iye yatha- makhulu Akusiyo imfihlo ukuthi uhola eziningi. Okubaluleke kakhulu umsebenzi wakhe wamanje - it is zokukhangisa zangaphansi ezibizayo.
Ngamunye intombazane photoshoot kuyinto ebukekayo futhi sexy. Phela, njalo liye lenza ku zangaphansi Chic noma bikini. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi Gemma wayengakaze izithombe nqunu ngokuphelele - cishe ngeke kamuva, uma sewazi ukuthi inzalo ebuntwini bakhe baqala ukuba singantengantengi. Cishe, naye uyaqaphela ukuthi awukwazi ngokushesha adalule zonke zako.
Eminyakeni ethile edlule, Gemma Atkinson ubelokhu eqashelwa njengomuntu omusha e ubukhazikhazi, walaliswa ahlonishwe ukumela Tour de France. Yini engase ishiwo yakhe siqu ukuphila buxom ubuhle? Wahlangana zabela namadoda amaningi, kodwa okuthandayo njalo inikezwe abadlali bebhola.
Waqale wazama ukwakha ubuhlobo umlingisi British Klivelandom Campbell ke enhliziyweni yakhe iwine lo mdlali lodumo Cristiano Ronaldo, futhi ngokushesha wayesebika esikhundleni ngo-Alan Smith, ehlala eNewcastle.
Kodwa indima ebaluleke kunazo zonke ekuphileni kwezinceku imodeli ebukekayo kudlalwa Umgadli UMlungisi Bent. By the way, ngokunembile ngenxa leso sithandwa sakhe esisha ngo-2007, lapho uqede ubuhlobo eside ne lady yakhe yangaphambili, yena ingane ezivamile. Gemma Atkinson kwakungelona enamahloni ngokumemezela yilokhu kushintsha kwezinto.
Kodwa lo muntu simo esishubile ezahlukene. Ngakho nje ahlukana ngalo Gemma lapho ehlangana UDanielle Lloyd, owayeneminyaka Miss England 2004 no Miss eBrithani ngo-2006. Kodwa maduze nje, ngesizathu esingaziwa, babenesifiso ziwa, futhi saqala ukwakha ubuhlobo nalo lolo footballer Gemma, ngubani babekhohliwe zonke nenzondo ebangelwa izenzo. Mhlawumbe wayemane owayethandwa kakhulu. Yiqiniso, abaningi Niye nalahla wakhe ngalokho kwaba lula kangaka ukuba nje ukhetha, kodwa intombazane ongakuqonda. isenzo sakhe kungenzeka kubonisa imizwa eqinile futhi eqotho. Futhi 'ungahlala kanjani ukwahlulela indoda uthando?
Gemma Atkinson: Filmography
Ake sibheke isithombe, okuyinto wadutshulwa lentombazane emangalisayo. Lapha uhlu lwabo: "Midsomer ukubulawa", "nenhlekelele", "oki Engcwele," "Street Waterloo," "Umthetho-oda: London", "Boogie Woogie", lwe Baseline, "amahora nantathu", "The Black Book" "Indlela uzoyeka isiphukuphuku, '" Wazalwa ukundiza "," Dyatlov ukudlula Mystery, "" esitolo amnandi ". Le filimu akuyona kakhulu, kodwa zonke izinkulumo ezithakazelisa kakhulu, futhi iyiphi kuzo ezingelapheka kukhanye up kusihlwa buthuntu. Abaningi babona lokuqala Gemma in the film "Imfihlo Dyatlov Pass" futhi kwaba-ke ukuthi unesithakazelo kuyo. Kungani kwenzekile? Kungenzeka ngoba lokhu ifilimu yatha- eRussia nakwamanye imidwebo obonisa Gemma abakhileyo ezweni lakithi akazange uhlupho bheka. Ake bathemba ukuthi usaziwayo uzoqhubeka sokujabulisa nathi ngomsebenzi wakhe e ifilimu nesithombe amahlumela.
Abantu baseBelarus, ukwakheka kwawo kanye namandla akhe kazwelonke
Kungani futhi kungani iphupho ex-isoka?